CIASA LINO DEFRANCESCO C 320 O22118-AT-058347 - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKatya
Ifakwe kwisitya esiphakathi kweencopho ezinomtsalane zeDolomites, ezifana neCatinaccio, iSassolungo, iMonzoni neLatemar, indlu yethu ibekwe Moena kumbindi weVal di Fassa ngo-1250 a.s.l. Imizuzu emihlanu ukusuka kwiziko ngeenyawo, le ndlu yonwabela indawo ethile ephanayo kunye nethe cwaka (indawo encinci yetrafikhi), indawo egqwesileyo yohambo kunye nohambo oluninzi kumakhulu ambalwa eemitha ukusuka ekungeneni kwendlela enkulu.
Iyunithi yezindlu inendlu enkulu enamagumbi amabini okulala 4 - 5, igcwele ikhitshi. Umrhumo wokuhlala kwisakhiwo sethu sele uquka: - ukusetyenziswa kombane, amanzi kunye nokufudumeza; - Inkonzo yokucoca ekupheleni kokuhlala. Izixhobo: iimbiza / izitya, izinto zokupheka, ifriji, i-mini-freezer, umabonakude, izincedisi kunye neetawuli kunye namashiti.
Ngesicelo simahla: i-ayina ibhodi, i-ayina, isixhobo sokomisa iinwele, isicoci sevacuum, ibhedi kunye nesitulo esiphezulu. Amagumbi ekwabelwana ngawo: indawo yokuhlamba impahla / igumbi loku-ayina, igumbi lokutyibiliza elityibilikayo elinesomisi sebhuthi.
IVal di Fassa yeyona ndawo ifanelekileyo yeeholide zakho ngalo lonke ixesha lonyaka!
Ngentwasahlobo nasekwindla, elona xesha lifanelekileyo lokuphumla kwaye ukonwabele uxolo noxolo olunikelwa ziintaba zethu ezimangalisayo! I-"Fairy of the Dolomites" ithatha eyona mibala ibalaseleyo kunye neyahlukileyo, ukusuka kubhakabhaka wesibhakabhaka ukuya kumhlophe wamafu, udlula kuluhlaza omenyezelayo wamadlelo kunye nemithi .... indawo yendlu yam yodwa umbono omangalisayo ephangaleleyo yaye qhinga zombini zokufikelela kwidolophu ngeenyawo kunye lula kunikezelo kumathambeka Ski ebusika.
Umbuki zindwendwe ngu- Katya